Ndị ụlọ ọrụ na-eji netwọk mmekọrịta ma na-aga nke ọma | ECommerce ozi ọma
Kemgbe netwọkụ mmekọrịta bidoro, enweela ọtụtụ ndị na-anwa iji ha iji nweta ọtụtụ ndị na-ege ntị. Ha niile chọrọ ka ọnụọgụ netwọk ha dị elu, n'ihi na a ga-enwe ọtụtụ mkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ yana, karịa ihe niile, maka nke a ka ekwupụta na ire ngwaahịa. Mana ọ dị nwute na ọ bụghị ha niile na-aga nke ọma. Otú ọ dị, enwere ụlọ ọrụ ndị na-eji mgbasa ozi mmekọrịta n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
N'ezie, enwere ọbụna ụlọ ọrụ ndị rụzuru ekele ha. Yabụ taa anyị ga-adị ire ma gwa gị gbasara ụlọ ọrụ ndị na - eji netwọkụ mmekọrịta iji jikọọ na ndị na - ege ha ntị, Ọzọkwa, na - aga nke ọma. Chọrọ ịma ka esi eme ya maka eCommerce gị?
1 Kedu ihe kpatara ị ga-eji tinye na netwọkụ mmekọrịta na eCommerce gị
2 Ndị ụlọ ọrụ na-eji netwọk mmekọrịta ma na-aga nke ọma
2.1 Ford, nke ụlọ ọrụ ndị na-eji netwọk mmekọrịta iji jikọọ
2.2 Ndị na-eme mkpọtụ
2.3 Ulo Kenay
2.6 Qwertee, nke ụlọ ọrụ ndị na-eji netwọk enweta mmekọrịta
2.7 Goiko Grịl
Kedu ihe kpatara ị ga-eji tinye na netwọkụ mmekọrịta na eCommerce gị
Mgbe ịmalite azụmahịa na ntanetị, ihe dị mkpa bụ na ịchọrọ ịnọ na saịtị niile na weebụ. Na ebe nrụọrụ weebụ gị, na Facebook, na Twitter, na Instagram, na Pinterest… Ee, nke ahụ dị mma, mana ị na-emehie. Na otu ezigbo njọ: jiri otu ozi ahụ maka netwọ mmekọrịta ọhaneze.
Ka anyị were otu ihe atụ. Have nwere onye na-eso gị na Facebook, Instagram na Linkedin. You na-ezite otu ozi na netwọkụ atọ a. Ha niile ha nhata. Onye ahụ nwere ike iche na ọ bụ nzuzu ịgbaso gị n'akụkụ atọ a, ebe ị na-agwa ya otu ozi ahụ. Kedu ihe ị na-eme? Kwụsị iso gị abụọ.
Ugbu a ka anyị tinye okwu ọzọ. I nwere netwọkụ atọ a, mana nke ọ bụla nwere ozi dị iche na ederede na nhọta. Don't cheghị na onye ọbụla na-eso gị ga-achọ ịmata ihe ị tinyere n’ebe ndị ọzọ? N'ihi na ọ ga-adị iche, n'ihi na n'otu ị nwere ike itinye asọmpi, na ibe akwụkwọ nkịtị, na egwuregwu ọzọ ...
Nke a bụ otu n'ime mmejọ ndị a na-ahụkarị, dị ka ịmepe blog na ịdegharị isiokwu ndị ọzọ maka ibe gị. E wezụga Google na-ata gị ahụhụ, ị ​​na-ezu ohi ọrụ na nke ahụ adịghị mma maka akara gị.
Ma n'ilekwasị anya na mgbasa ozi mgbasa ozi, ha dị mkpa n'ihi na bụ ebe ndị na-ege gị ntị nọ. Imirikiti mmadụ nwere ike ịnweta karịa na netwọk mmekọrịta n'ihi na ị mepee ụzọ nke nkwukọrịta na ha. Ugbu a, ihe dị mkpa bụ ịmata otu esi ejikọ. Maka nke ahụ, ihe atụ nke ụlọ ọrụ ndị na-eji netwọk mmekọrịta eme ihe n'ụzọ dị irè nwere ike inye gị nduzi. Anyị na-ahụ ha?
Ndị ụlọ ọrụ na-eji netwọk mmekọrịta ma na-aga nke ọma
Iche echiche banyere ụlọ ọrụ ndị na-eji netwọk mmekọrịta nwere ike ịbụ ụwa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ niile taa na-eji ha. Ma pụta na ha ma na ha maara gị site na netwọkụ mmekọrịta ndị ahụ adịchaghị ọtụtụ. N'ezie, lee ụfọdụ ihe atụ banyere ya.
Ford, nke ụlọ ọrụ ndị na-eji netwọk mmekọrịta iji jikọọ
Ford bụ otu n'ime ihe atụ mbụ anyị nwere ike inye gị nke ụlọ ọrụ na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe n'ụzọ ziri ezi. Ma ọ bụ ọsụ ụzọ na-enye ihe ha kpọrọ dị ka "Ford Social". Ọ bụ ọwa pụrụ iche ebe ndị mmadụ nwere ike ịnye echiche maka ha ka ha lebara anya wee zụlite ọrụ ga-adigide.
Ọ bụ ụzọ itinye ndị ọrụ gị n'ọrụ n'ihe ha nwere ike ime.
Companylọ ọrụ a nwere aha mba ọzọ bụ Spanish. Ọ bụ akara nke iko emere na Alicante nke jisiri ike gbanwee ụwa eCommerce. O mekwara ya site na netwọk mmekọrịta. Gịnị mere? O tinyere ego ya nnukwu ego na Facebook Mgbasa ozi iji kpọsaa ma rute ndị ahịa a tụrụ anya. Na mgbakwunye, ọ nwetara nkwado nke ndị ama ama were foto ha na enyo ha wee mee ka ọtụtụ ndị chọọ i imitateomi ndị ama ama ha, na-azụ otu ngwaahịa ahụ.
Site n'inye ndị ahịa ngwaahịa dị ọnụ ala, ahịa ha gbagoro ọbụna karịa. Mkpakọrịta ha site na netwọk mmekọrịta na-adịgide adịgide.
Onye kwuru na ụlọ ọrụ enweghị ike ịga nke ọma site na mgbasa ozi mmekọrịta? N'okwu a, Kenay Home meriri na Instagram. Ihe o mere bụ egosiputara foto nwere oke mma ma maa mma nke ukwuu ndị ọrụ ga-ajụ maka arịa ụlọ na ịchọ mma. Ma n'ezie, ha ahapụghị ajụjụ ndị ahụ azaghị, nke mere ka ndị ahịa chee na ha na-azụ ahịa n'ụlọ ahịa anụ ahụ, na-abịa oge niile.
Akwụkwọ ọ bụla Coca-Cola nwere mgbe niile nwere ọtụtụ puku mmasị na mmekọrịta. Ọ na-emekwa ya n’ihi na ha ha na-eji mmetụta na mmetụta uche eme ihe site na onyonyo na vidiyo ndị edepụtara.
Ihe odide ya adighi nma dika ihe abuo a, ya mere ndi mmadu ji eso ha. Cheta na ọtụtụ Coca-Cola mkpọsa ngwá ahịa na telivishọn kụrụ ike, na i nwere ụfọdụ echiche na-ka na-echeta (dị ka Coca-Cola bụ maka onye ọ bụla, n'ihi na highs, lows…).
Orangelọ ọrụ oroma a chere na ha nwere ike ire ngwaahịa ha na Internetntanetị. Ma n'ezie, ọ malitere dị ka onye ọ bụla, na-achọ ịnọ na netwọk mmekọrịta niile. Ma afọ mbụ adịghị mma. Agbanyeghị, ha ghọtara na na Twitter ha nwere mmekọrịta karịa, ọrụ ha rụkwara ọrụ karịa netwọkụ ndị ọzọ, yabụ ha zitere na ya Ha chọpụtara na ndị ha na-ege ntị na-elekwasị anya na Twitter karịa na netwọk ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ha nyere ọdịnaya bara uru, ma soro ndị na-eso ụzọ nwee mmekọrịta.
Gịnị ka ọ pụtara? Na ha malitere inwe ihe ịga nke ọma ma ugbu a ahịa nke oranges site na netwọkụ dị mma karịa nke afọ mbụ ahụ.
Qwertee, nke ụlọ ọrụ ndị na-eji netwọk enweta mmekọrịta
Amachaghị ụlọ ọrụ t-shirt a na Spain, ma ọ bụ ikekwe ọ bụ n'ihi na ọ na-enye ọtụtụ ahịa na t-shirts (na 4-5 na 6 euro). Ihe dị mma bụ na atụmatụ ha dị nke ukwuu, ị gaghị ahụ ha na T-shirts ebe a. Ha dịkwa ezigbo mma.
Ha na-eji soshal midia na-eme ka atụmatụ ndị ahụ dịrịkwuo n’otu, yana ka ndị ọzọ na-emekọrịta ihe n’ụwa niile. Ma ebe ọ bụ na ha na-ebuga ebe niile, na mgbakwunye na ọnụahịa dị ọnụ ala, ha bụ ihe ịga nke ọma n'ụwa niile.
N'okwu a, ụlọ ọrụ a jiri Facebook iji dọta ndị ahịa. O mekwara na-enye koodu ego na netwọkụ mmekọrịta, n'ụzọ dị otú ahụ na ha kwụrụ ndị soro ha ụgwọ. N'ihi ya, ọ toro, mana ọ rụkwara mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ ya, n'ụzọ dị ka ọ dị ka ị na-eguzobe mkparịta ụka na ozugbo, n'ihi eziokwu ahụ na ha maara nke ọma.
Ugbu a, ọ bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọ hamụ hamụ hamburger a kacha mara amara na Spain na ọ na-agbaso usoro iwu ya nke ịnye ndị ahịa onyinye na ego ha na-eji n'ụlọ nri ya. N'ihi na, maka ha, ihe na-emeri bụ uche na ọrụ kachasị mma, ọbụlagodi na ego.
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji mgbasa ozi mmekọrịta nke ọma. Nwere ike ịgwa anyị ikpe nke otu n'ime ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Ndị ụlọ ọrụ na-eji netwọk mmekọrịta